तिथि मेरो पत्रु » कसरी तिथि लागि – पुरानो स्कूल शैली
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 25 2020 |3मिनेट पढ्न
मूल्य साथै लगभग सबै मा भइरहेको छ, अब जोडी क्याल्सियम जसमा कि सादा साधारण रस देखि, जो सुधार सूत्रहरू संग गरिएको छ कि उत्पादनहरु बेच्छ को किराना पसलमा. यद्यपि, अझै पनि पुराना स्कूल रुचि गर्नेहरूलाई छन्, यो सम्बन्ध आउछ पनि जब?
तथापि, पुरानो सम्बन्ध सल्लाह अझै पनि नयाँ-उमेर mantras मा पानी पकड गर्न सक्छन्? यो सुन जत्तिकै अनमोल छ? यो पत्ता गरौं.
जीवित शिष्टता राख्नुहोस्
कुनै पनि युगल सोध्नुहोस्, तिनीहरूलाई क्लिक गर्नुहोस् र तिनीहरूले सबै भन्दा अधिक संभावना तिनीहरूले प्रत्येक अन्य लागि कायम गरेका छन् आदर उल्लेख हुनेछ के गरे बारेमा लामो र सफल सम्बन्ध मा गरिएको छ जो. महिला हरेक दिन समानता लागि लड्न बस किनभने, तिनीहरूले पनि शिष्टता लडिरहेका छन् भन्ने होइन. एक महिला अझै पनि कुर्सी बाहिर खींचती वा जो एक सज्जन सम्बन्ध मा हुन प्रेम तिनीहरूलाई लागि ढोका खुल्छ हुनेछ. महिला को लागि यस गर्दा आदर देखाउँछ र यो पनि विवाह पछि जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ.
क्रोधित सो नगर्नुहोस्
तर्कको थियो गरेका जोडे सधैं एक रात यो फोन देखि पहिले यो शान्तपूर्वक बाहिर तरिका प्रयास गर्नुपर्छ. तथापि, एक विवादहरू बाहिर सर्ट अघि, यो पहिलो शान्त गर्न आवश्यक छ, केवल स्थिति खराब थियो एक स्वभाव-माथि राज्य मा एक समाधान पाउन प्रयास रूपमा. तिनीहरू पनि तिनीहरूले प्रेम हो र तिनीहरूले जसलाई आदर तर्क कसैसित भयो कि सम्झनुपर्छ, त्यसैले यसको amicably विषयमा समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण.
आगो बलिरहेको राख्नुहोस्
दुई मान्छे डेटिङ सुरु गर्दा, तिनीहरूले प्रयास हरेक क्षण विशेष महसुस सुनिश्चित गर्न बनाउन, प्रेम र स्नेह संग बौछार . सम्बन्ध अब पछिल्लो गर्न को लागि, तथापि, युगल प्रतिबद्धता को समान स्तर कायम गर्न गाह्रो काम गर्नुपर्छ. सबै सम्बन्ध माथि र तल छ, जो एकदम सामान्य छ. तथापि, तिनीहरूले सम्बन्ध सीट फिर्ता लिन कहिल्यै गर्नुपर्छ. उनीहरू अघि नै सास मा सम्बन्ध जारी गर्नुपर्छ, यो त्यतिबेला सँगै राखिएको कुरा हो र अझै पनि आउन समयमा सँगै राख्न सक्छन् किनभने.
एक दिन एक विशेष प्रशंसा साझेदारी नगरी पारित नपाओस् प्रयास. यो आफ्नो साथी कस्तो देखिन्छ मा एक प्रशंसा हुन सक्छ, तिनीहरूले गंध वा कति तिनीहरूले सराहना गर्दै कसरी. तिनीहरूले सुन भन्दा धेरै बहुमूल्य छन् कि तिनीहरूलाई बताएँ. एक आफ्नो प्रशंसा संग निष्कपट लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो. यो सम्बन्ध सार्थक बनाउन यी साना कुराहरु. यो सल्लाह पुरानो हुन सक्छ , तर यो सबै वर्तमान सम्बन्ध अचम्म काम गर्दछ.
एक बिदाइ चुम्बनले साझा
उनीहरूको सम्बन्ध आनन्द लिई एक जोडी को लागि यति सरल धेरै एक अलविदा चुम्बन साझेदारी लाग्न सक्छ र नगण्य, यो एक धेरै अर्थ र गर्मी को एक धेरै छोड्छिन. एक बिदाइ चुम्बनले साझा आफ्नो साथी संग हुन सक्छ कसरी स्नेही एक देखाउने उत्तम तरिका हो. यसबाहेक, यस दैनिक गरिरहेको सम्बन्ध बलियो बनाउन मदत गर्छ, यो प्रेम झल्काउँछ तिनीहरूले प्रत्येक अन्य लागि महसुस.
खाना सँगै लिनुहोस्
सँगै भोजन लिएर जोडे बलियो र परिपक्व बन्धन राख्न मद्दत गर्छ. एक साथी भोजन कक्ष मा खान्छ जहाँ अवस्थामा जोगिने, अन्य एक बैठक कोठा मा छ, जबकि, टेलिभिजन हेर्दा. यो कुनै पनि सम्बन्ध को विकास को लागि स्वस्थ छैन. सँगै खाना लिएर एक जोडी च्याट गर्न एक मौका दिन्छ. तथापि, च्याट भोज रमाइलो एक गर्नुपर्छ भनेर ध्यान, जो घर्षण कारण र तर्कहरू टाढा बस्नुपर्छ भन्ने विषय अर्थ. सँगै खाना लिने सार आराम गर्न छ, त्यसैले च्याट रमाइलो विषय चयन.
सबै कहिलेकाहीं एक आकर्षक उपस्थिति कायम
एक सधैं आफ्नो उपस्थिति सुधार गरेर एउटा अतिरिक्त माइल जान तयार हुनुपर्छ, ताकि आफ्नो साथी को लागि राम्रो हेर्न. ठीक, शायद एक सूट मा आफूलाई donning वा ककटेल पहिरन मा सबै आरामदायी लाग्न छैन सक्छ, तर सफा आफूलाई राखन, राम्रा र सँगै राम्रो-राखे जरूरी छ. यो कसैको साथी को लागि राम्रो हेर्न पनि धेरै प्रयास लिन छैन, यो सम्बन्ध बलियो मदत गर्नेछ विशेष गरी भने, यो साझेदार प्रत्येक प्रत्येक अन्य जीवित लागि आफ्नो जुनून राख्न सक्षम हुनेछ रूपमा.
त्यो पुरानो प्रमाणित गर्न कुनै राम्रो तरिका यी सम्बन्ध यस्तो सल्लाह दिन्छ माध्यम भन्दा सुन त्यहाँ छ. सुन एक बहुमूल्य धातु र धेरै मूल्यवान छ. एउटै सास मा, पुरानो यस्तो सल्लाह दिन्छ यी वर्तमान सम्बन्धमा धेरै मूल्यवान हो. त्यसैले, यी सुझाव अभ्यास र सधैंभरि जीवित स्पार्क राख्न सम्बन्ध छ, जो कुनै को लागि महत्त्वपूर्ण छ.